China GDU type silicon carbide heating element factory and abakhiqizi | ISICTECH
Izici eziyisisekelo zezinto zokushisa ze-U type silicon carbide: U type silicon carbide heating element is synthesized from two silicon carbide heating element with a common end end. Uhlobo lwe-U uhlobo lwe-silicon carbide yokushisa ingaxhunywa entanjeni yamandla ekugcineni komunye wesithando somlilo. Isetshenziselwa ikakhulukazi iziko lokushisa okuphezulu namakhishi anezidingo eziphakeme zokushisa okuphakathi kwesithando. Izici zayo zisindisa amandla nempilo yesithando eside.
Isici sokushisa se-silicon carbide sizosabela ngezinto eziningi zamakhemikhali ezisuswe ezintweni ezixutshiwe ngesikhathi sokudubula. Uma ihlangana namanye amagesi anjengamanzi, i-hydrogen, i-nitrogen, isulfure, i-halogen, ne-aluminium encibilikisiwe, Lapho kuthintana ne-alkalis, usawoti, izinsimbi ezincibilikisiwe, kanye nama-oxide ensimbi, angase asabele, ahlasele noma enze i-oxidize. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuqonda indlela efanele yokusebenzisa, ethambekele ekwandiseni impilo yokusebenza kwento yokushisa ye-silicon carbide, kanye nokushisa nokuphakama kwayo okuphezulu.
1. Isici sokushisa se-silicon carbide sinamandla amakhulu wokukhanda, futhi amandla okugoba afinyelela ku-100-120MPa.
2. Ukushisa okuphezulu komhlaba kungafinyelela kuma-degree ayi-1500.
3. Izinga eliphakeme lemisebe ye-infrared, ububanzi obulinganayo be-silicon carbide heat element izikhathi ezingama-5-10 zocingo olujwayelekile lwe-nickel-chromium.
4. Impilo ende yokusebenza, ukufakwa okulula nokugcinwa.
5. Isici sokushisa se-silicon carbide sinokumelana okuqinile kwe-oxidation, ukumelana nokuqina okuqinile, futhi sinokumelana okuhle kakhulu kokushiswa kokushisa.
Singenza usayizi uphume etafuleni futhi, ake ungazise usayizi owufunayo.
IDAYILI (D) I-HOT ZONE (L1) INDAWO EBANDAYO (L2) DISTANCE (E) IBhuloho UKUMELANA
IDAYILI (D) ISIKHATHI3
Langaphambilini Uhlobo lwe-GC lwesi-silicon carbide element element
Olandelayo: Uhlobo lwe-LS (ukuvunguza okuphindwe kabili) isici sokushisa se-silicon carbide
Isithando Somlilo Sokushisa Izinto
Izinto ze-Sic Heater
Izinto Zokushisa kwe-Sic
Kuvunguza Sic Heating Elements